Diinta — Caasimada Online | Isha Wararka Sugan
QISADII BILAAL BIN AL RABAAX (RAC)	January 11, 2013 1:48 AM0 comments	Maxaa ku ogeysiiyey shaqsiyadda Bilaal? Wuxuu ahaa Bilaal ibnu Ar Rabbaax- Abii Cabdillaahi Al Xabashi, waxaa la sheegaa inuu ku dhashay magaallada Dimashiq, sidoo kale waxaa la yiraahdaa mayee wuxuu ku dhashay Makka Al Mukarramah saddex sano ama ku dhaw kadib dhacdadii loo yaqiinnay Caamul Fiil. Bilaal wuxuu addoon adeega […]
Qur’aanka iyo Raqamka (Tirooyinka) (Mucjisada Qur’aanka)	January 2, 2013 12:05 AM0 comments	Carab waxay ahayd dad kuwa ugu liita xagga cilmiga iyo aqoonta casrigii Muxammad (NNKH) lasoo diray Nebi ahaan, waxa keliya ee ay ku faani jireenna wuxuu ahaa gabayga iyo aftahannimada. Waa halka ay Yahuuddii dhulka Xijaas ku nooleed ka oran jirtay sida uu Ilaahay inooga qisooday. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ […]
Muxuu yahay sanadka miillaadiga? (Diinta iyo micnaha 12-ka bil)	January 1, 2013 5:00 AM0 comments	Haddaynu nahay ummad Islaam ah waxaa naga reebban u dabbaal degidda wax aanan ka ahayn ciidaha uu Ilaahay nagu fadilay ee ciidul fitriga iyo ciidul adxaha. Waxaa inaga reebban inaan la dabbaal degno umada lumay oo aan salaad waliba niraahno Ilaahayoow! jidkooda hana marsiin (Al maghtuubi calayhim, waladdaalliin). Sanadka miillaadiga […]
Inta uu la eg yahay ballaca albaabka Jannada iyo Mucjisada Rasuulka SCW	December 27, 2012 5:00 AM0 comments	Nebi Muxammad (صل الله عليه وسلم), wuxuu ahaa nebigii ugu dambeeyay nebiyada Alle. Mucjisada la siiyeyna nebi isaga ka horreeyay lama siinin. Nebi Muxammad (صل الله عليه وسلم) waa nebiga loo yaqaan sayidul Ambiyaa, warrusul. Waa sidoo kale nebiga loo yaqaan khaatimul ambiyaa warrusul. Waa nebiga ummada oo dhan ay […]
Kaneecada iyo Qur’aanka (Mucjisada Qur’aanka Kariimka ah)	December 13, 2012 12:10 AM1 comment	Haddii aad maqasho kaneeco durba waxaa kugu soo dhacaysa inay tahay noole yar, oo kamid ah noolaha Ilaahay uumay ka ugu yar. Bal’ ee haddii tusaale laguugu soo qaato noolahaasi xataa aad baad u yaabi lahayd, oo waxaad oran lahayd ”Maxaa loola jeedaa tusaalahan”? Xayawaankani (noolahani) xasharaadka ah Qur’aanka kariimka […]
Raddin Shubbaha: Islamku ma amro liwaadka (Difaaca Nebiga NNKH)	December 10, 2012 3:20 AM3 comments	Qormadani waxay daba taal qormooyin taxane ahaa oo lagu raddinayay shubahaatka lagu marin habaabiyey makasta iyo caamada ummaddeenna Soomaaliyeed, waana duullaan mudan in cilmi iyo caqli looga hor tagaa oo kirishtaha uu nagu soo qaaday, si uu u fasahaadiya dadkeenna aanan dhigaalka waligood marin dhawaq uun mooyaane. Qormadani waa taxanaha […]
Qur’aanka oo Yahuuda ku tilmaamaya sida Dameer. (Mucjisada qur’aanka)	December 4, 2012 9:22 PM5 comments	Maalinba maalinta ka dambeysa Alle wuxuu bannaanka keenayaa micnaha iyo cilmiga ku hoos duugan iyo mucjisada ku laaban aayad kasta iyo xaraf kasta oo kamid ah Quraankiisa kariimka ah. Ilaahay waa diiday wax kale inuu dhameys tira oo ka sare mariya diintiisa diimaha kale oo dhan mooyaane. Yahuuddu waxay kamid […]
Furriinka:- “Saddex Dalqo” oo hal mar ah ma waxay la mid tahay “HAL”?	12:05 AM1 comment	Waxaan rabaaa inaan si faah san uga hadlo furiinka saddexda dalqo ee marka nin ragga ah uu xaaskiisa furay hal amr uu ku dhowaaqaya, haddana uu ku andacoonayo in kaliya ay hal dalqo dhaceyso. هل الطلاق الثلاث بلفط واحد يقع ثلاث او واحدا قذهب جمهور الصحابة والتابعين وائمة المذاهب الاربع […]
Raddin Shubbaha: Dilkii Casmaa Bin Marwaan. (Difaaca Nebiga NNKH)	November 20, 2012 9:00 PM3 comments	Qormadani waa taxanaha raddin shubbaha oo aanu ku raddineynay qoraallo uu inoosoo direy yar Soomaaliyeed oo sheeganaya inuu ka baxay diinta Islaamka, waxyaaba badanna oo ay beri ka tahay ku tuhmaya diinta Islaamka iyo ahalkeeda. Su’aalo badan oo uu qabay iyo shubbaha ayaa ka raddinay, tanna waxaan rajeyneynaa inay mari […]
RADDIN SHUBBAHA- Nebi Muxammad (NNKH) ma waxaa la oran jirey Quthum? ( Difaaca Suubanaha)	November 12, 2012 7:43 PM2 comments	Qormadani waa mid kamid ah silsiladdii taxanaha ahayd ee raddinta shubbahaatka lagu marin habaabiyey umaddeenna caamada ahi ee aanan diinba aqoon mid Islaam iyo mid kale toona, waxayna daba taal qormooyin raddin shubaha ahaa oo aanu ku raddineynay nin magaciisa kusheegay Hassan Colhaye. Hassan Colhaye wuxuu kaga duwan yahay ragga […]